WOWOW Azụmaahịa kichin ite igwe
Home / Faucets kichin / Ikpokoro efere Faucets / WOWOW Azụmaahịa Kitchen ite ite Pasta Arm Chrome
WOWOW Azụmahịa Kitchen ite Igwe Pasta Arm Chrome
Ndị ahịa si Taiwan, Japan, Germany, na America na-eto nnukwu nchekwa elu ite dị n'elu ebe a na-ekpo ọkụ.
Ejiri igwe na esịcha rụọ ọrụ ya, ọ nwere akụkụ ọfụma.
Ekwenyeala ngwaahịa a n'okpuru ISO.
Site na mgbanwe, akwa a na-esi ebe a na kichin nwere ike iru ebe ndị siri ike iru.
Ntụziaka nwụnye 2311100C
Fure fulawa ite eji esi nri kichin gi 2311100C
Ebe ite na-amị amị bụ mmiri ga -emere ebe ị na-esi nri ogologo aka. A na-ejikọkarị ite nhicha akpa na afụnwu ọkụ na kichin gị. N'ụzọ dị otu a, ị ga - enwe ike iji mmiri jupụta ite n'ite, ebe edobere ha n’elu osi ite. Dị ka nke a, ịgaghị ebute ite ndị juru eju si na sọdetị kichin gị na stovu gị. Falopeti ọdịnala ọdịnala agaghị enwe mgbagwoju anya ya na nsị mmiri kichin ndị ọzọ nwere ogwe aka. Isi ihe dị iche n’etiti ite mmiri na ite mmiri na friji esi esi na mmiri a na-enweta mmiri bụ mmiri na-ekpo ọkụ. Iji ite mmiri na-eweta mmiri mmiri chọrọ naanị mmiri oyi. Ma n’ezie ị nwere ike ịjikọ ite mmiri ite mmiri na fụetị kichin a na-eri nri iji nweta nkwekọrịta kachasị na kichin gị.
Mgbe ị na-emebe kichin gị, na mbụ ị na-echekarị etu kichin nrọ gị kwesịrị ịdị. Mana ikekwe, ihe dị mkpa bụ arụmọrụ nke kichin nrọ gị. Havekwesịrị iche echiche etu esi esi esi nri, ụdị akụrụngwa ị chọrọ, ebe ịchọrọ isi mmalite ọkụ, yana otu ị nwere ike isi dozie kichin gị ngwa ngwa. Otu akụrụngwa ọ bụla dị na kichin gị na-enye nhọrọ dịgasị iche iche. Nke a na-agụrụ gị ụzọ maka nri kichin gị. Ma otu ihe a na-echefukarị bụ ọrụ kachasi mma nke ite mmiri dite. Naanị n'ihi na anaghị ebe niile mara ya. N’aka nke ọzọ, ụdị mmiri kichin a nwere ike ime ka ndụ gị dịkwuo mfe mgbe ị na-esi nri.
Kedu ihe mere ịchọrọ ite mmiri na-ekpuchi ite?
Nnukwu ihe dị n’ite ite ji eme mmanụ bụ na ọ na-azọpụtakwa gị na i bu nnukwu ite jupụtara na mmiri si na kichin ghaa ite gị. Nke a nwere ike ịbara gị uru karị mgbe ị na - enweghị ike ibu ihe na - adịghị mkpa ma ọ bụ na ị chọghị ibu. Ibu ite dị arọ nwere ike ibute ukwu gị, aka na azụ. Nke ahụ nwere ike ọgaghị adaba mgbe ị na-enwe ihe mgbu na azụ ma ọ bụ ogwe aka. Ọzọkwa, ọ nwere ike ime na nnukwu ite na-adaghị na ebe ị na-asa. Maka nke a, ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka ịmejupụta nnukwu ite na mmiri.
You nwere ike ịhọrọ n'ime isi ihe abụọ nhọrọ mgbe ọ na-abịa ite filler. E nwere otu-jointed na abụọ-jointed ite filler. Ọ dabere na oke kichin kichin gị nke ga-arụ ọrụ kachasị mma maka gị. Ọ bụrụ na ị nwere stovu kichin nke nwere ọtụtụ ndị na-ere ọkụ, ọkpọkọ ọkpọkọ nke nwere okpukpu abụọ ga-arụ ọrụ kachasị mma n'ihi iru ya. The WOWOW Modern Farmhouse Pot Filler Faucet Polished Chrome na-enye gị ogwe aka jikọtara ọnụ na ngụkọta nke 20 sentimita asatọ. Site na ọkpọkọ ọkpọ ite a dị ogologo ị nwere ike iru akụkụ ọ bụla nke kichin kichin gị ma yabụ na-enye nkasi obi kachasị.
Baa Uru ite ndozi atụmatụ
Mpempe akwụkwọ mpịakọta nke WOWOW dị oke mma yana ogwe aka ya jikọtara ọnụ, ebe ị nwere ike ịdọkọta ogwe aka ahụ kpam kpam na mgbidi stovu. N'ụzọ dị otú a ọ gaghị ewere ohere ọ bụla na kichin gị ma ọ gaghị ele anya. N'ihi nhazi mgbanwe ya ị nwere ike ịchekwa ohere kichin dị oke ọnụ. Enwere ike ịwepụ ọkpọ mmiri a dị elu maka ịkwanyere ụdị ejiji mara mma nke kichin gị. Gaghị enwe ike ịhụ ọkwa ọkpọ ite a na mgbidi gị!
Ọtụtụ mmadụ na-atụ ụjọ na ọkpọkọ ite mmiri ga-ehi ma mee ka mmiri mebie na kichin gị. N'adịghị ka pọmpụ mmiri kichin, mmiri kpụkọrọ nwere ike ịmị ebe a na-esi esi nri. Iji ite mmiri na-awụpụ mmiri nwere ike ịdaba na kichin gị ma ọ bụ na kichin. Na njedebe na kichin kichin gị nke nwere ike ibibi ụfọdụ mmebi. Maka ebumnuche nchekwa, a na-ejikọkarị ọkpọkọ ite nwere ite abụọ. N'ụzọ dị otu a, ọkpọkọ ọkpọ mmiri na-echebe okpukpu abụọ site na nsị. Ogwe aka a gbatịrị nke okpueze nke WOWOW nwere valvụ abụọ maka njikwa usoro abụọ. Mgbe ịmechara nri, ị ga-agbanyụ valvụ nke ọma, yabụ enweghị mmiri ga-awụfu. N'ụzọ dị otú a, kichin gị nchekwa na-ekwe nkwa.
Elu mmiri ite nchekwa mma
Teknụzụ teknụzụ WOWOW nke dị ugbu a bụ Faucet Polished Chrome ejiri teknụzụ ọgbara ọhụrụ rụpụta ya. N'ụzọ dị a, WOWOW ana achi achi ajuju nke ite a na –eme ka iru ihe oma. Igwe mmiri nchekwa WOWOW ite a na-enye mmiri na-enye ndụ nkwa ogologo oge n'ihi ịdị elu ya na-egbu maramara nke dị n'ime. Ejiri ọla kọpa mee ezigbo ọla ọcha (ọla). Enyere gị ike na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị ọcha na-esite n'ọdọ mmiri a na-enweghị ihe ọ bụla dị ize ndụ. Ahụike gị karịrị ihe kachasị mkpa! Ọbụghị maka ihe efu WOWOW ka enyere ISO.
Ezigbo mmiri a na-eji mmiri ite a
Site na njikwa elu ogo 360 dị elu, ị nwere ike iru ebe ọ bụla ma jupụta ihe ọ bụla. Ejiri valvụ ndị kacha mma ma dịkwa mma nke ukwuu iji aka. Ga-ahụta ogo ahụ ozugbo ị jiri valves. Na ọnọdụ iyi na aka nke ọzọ zuru oke maka mmiri mmiri. Ọ na-enye nrụgide kwụ ọtọ iji nye mmiri mmiri mgbe niile. Igwe mkpuchi mmiri na-akwụ elu na-ezere ịgbanye ma ọsụsọ iji nye gị nkasi obi kachasị mma. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ site na foups kichin gị!
Mmiri ite nke WOWOW ejiri brushed na nickel anwụrụ rụchaa. Ọ nwere klọọkụ chrome mara mma nke ga-adaba n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kichin ọ bụla. WWW ite a na-ehicha mmiri na WOWOW bụ ihe na-eguzogide ma dị mfe ịsacha. Nọgide na-edebe ite gị na-ekpuchi mmiri flọtọ dịkwa ya mma. Nwere ike idobe draịva ite gị ka ọ dị ọhụrụ ruo ogologo oge. WOWOW na-enye akwụkwọ ikike afọ 5 na mmiri ọpụpụ ya niile. Maka nke a, ịmara na ịchọtala ite mmiri na-ere mmiri na-enye gị ogo kacha mma ọnụahịa. Site na inyeghachi ego ụbọchị 90 anyị kwere nkwa, ị ga-eweghachi ite mmiri flọet gị enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọghị ya. Mana anyị ma na nke a agaghị eme. Anyị tụkwasịrị obi na ngwaahịa anyị!
Uru nke ite akpachapu anya ite nwere na:
G Ọ na-enye kichin ọ bụla
Ngwa nuputa ite gi na osivu gi
Arm Ogwe aka dị egwu nwere iji wepu ite dị n'ime mmiri ngwa ngwa
· Abụọ ejikere maka mgbanaka kachasị mma
You can nwere ike iru ọsọ ọsọ na sentimita iri abụọ
· Pụrụ iche eji achọ chrom
Of ihe eji eme ọla di nma
· 5 afọ akwụkwọ ikike
SKU: 2311100C Categories: Faucets kichin, Ikpokoro efere Faucets Tags: Egburu ya, Ọkpụ ite, Mgbidi gbara
15.51 x 9.61 x 2.05 sentimita
ite dị ka ọkpọkọ chrome
Ikpokoro efere Faucet ịkpakọba Double Aka Chrome
Number nke ejiri
Azụmaahịa / talọ oriri na ọtaụtaụ / ebe obibi / ime ụlọ
Pot dịanyụọ ọkpọkọ / NPT njikọ; Neoperl ABS aeractor; Arịọnụ Ngwa (German Fischer naịlọn arịlịka bolt)
WOWOW Gooseneck Kitchen Faucet with Dọpụ Sp ...
WOWOW Pot Filler Faucet karịrị ebe a na-edobe eghe na ....